पत्रकारकाे निधनले महासंघ स्तब्ध2016-11-24T11:40:18+00:00
वीरगंजमा क्रियाशिल पत्रकार विद्यार्थी गिरीको सवारी दुर्घटनामा परी निधन भएको दुखद् खवरले नेपाल पत्रकार महासंघ स्तब्ध भएकोे छ । ५५ वर्षीय गिरीको मंसिर ७ गते काठमाडौंबाट वीरगञ्ज जानेक्रममा ना. १ .ज ११८० नम्बरको टाटा सुमो मकवानपुरको सिस्नेरीस्थित भिमफेदीम दुर्घटना हुँदा निधन भएको हो । स्वर्गीय गिरीका श्रीमती, ४ छोरी र २ छोरा हुनुहुन्छ ।
महासंघ स्वर्गीय गिरीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अपर्ण गर्दै उहाँको आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दछ । साथै, दुःखको यस घडीमा शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछ ।
……………… उजिर मगर महासचिव
http://fnjnepal.org/?p=32312016-11-23T04:39:09+00:00Bhuwan Karkiप्रेस बिज्ञप्ति२०७३÷८÷८वीरगंजमा क्रियाशिल पत्रकार विद्यार्थी गिरीको सवारी दुर्घटनामा परी निधन भएको दुखद् खवरले नेपाल पत्रकार महासंघ स्तब्ध भएकोे छ । ५५ वर्षीय गिरीको मंसिर ७ गते काठमाडौंबाट वीरगञ्ज जानेक्रममा ना. १ .ज ११८० नम्बरको टाटा सुमो मकवानपुरको सिस्नेरीस्थित भिमफेदीम दुर्घटना हुँदा निधन भएको हो । स्वर्गीय गिरीका श्रीमती, ४ छोरी...Bhuwan
« पत्रकार रिहाइकाे माग
दोस्रो पटक पत्रकार दुर्घटना वीमा गरिएका पत्रकारहरुको नामावली । »